यसरी चल्छ प्रचण्डको दुर्इघेरे सचिवालय: कसलाई गर्लान नियुक्ति ? | CHALKHEL.COM
Home पत्रपत्रिकाबाट यसरी चल्छ प्रचण्डको दुर्इघेरे सचिवालय: कसलाई गर्लान नियुक्ति ?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजनीतिका ‘हट केक’ हुन् । दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, शान्तिप्रक्रियादेखि अहिलेसम्मको देशको राजनीतिमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दाहालको दैनिकी अत्यन्त व्यस्त छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
Previous articleविदेश भ्रमणमा चौमासिकमै सकियो ६ करोड: ‘रहर र सोखका कारण विकृति बढ्यो’
Next articleएकीकरणको तयारीमा वैद्य र विप्लव